जहाज चढ्दा मोबाइल किन ‘एयरप्लेन मोड’ मा राख्नुपर्छ ? यस्तो छ जान्नैपर्ने कुरा – Namaste Host
March 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जहाज चढ्दा मोबाइल किन ‘एयरप्लेन मोड’ मा राख्नुपर्छ ? यस्तो छ जान्नैपर्ने कुरा
काठमाडौं । जहाजमा यात्रा गर्दा यात्रुलाई सधै फोन स्विच अफ वा फ्लाइट मोडमा राख्न आग्रह गरिन्छ । यसको पछाडिको कारण तपाईंलाई थाहा छ त ?वास्तवमा फोन, ट्याबलेट तथा विद्युतीय ह्याण्डसेटबाट आउने विद्युत चुम्बकीय तरङ्गलाई रोक्न फोनलाई स्विच अफ गर्न लगाइन्छ ।तर आजभोलि पाइलट आफैंले आफ्नो आईप्याड तथा अन्य ट्याब्लेट विमानको ककपिटमा राखिरहेका हुन्छन् । आफ्नो पेपरवर्कका लागि ती उपकरण विमान चालकले प्रयोग गर्दछन् ।
यसबाहेक विमानका अन्य कर्मचारीहरुले पनि ठूला-ठूला फोन र ट्याबलेट प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसकारण ढुक्क भएर तपाईं आफ्नो फाेनलाई स्विच अन गर्न हत्तारिनुभएकाे छ भने, पख्नुहाेस् ।वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विमानका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने यी उपकरणले तरङ्ग सृजना गर्दैनन् । अर्थात् ती सबै परीक्षण भएका उपकरण हुन् ।
तर यी परीक्षण गरेका सबै उपकरण पनि सुरक्षित हुँदैनन् । २०११ मा केही बोयिङ ७३७ विमानको फ्लाइट डेक स्क्रिनका केही विशेष मोडलका भागहरु तरङ्गित भएको देखिएकाे थियाे ।विमानहरुमा इन्फ्लाइट इन्टरनेट प्रदान गर्न एकपटक व्यापक परीक्षण भएको थियो, तब उक्त परीक्षण प्रक्रियामा विमानभित्र एकदमै धेरै विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग उत्पन्न भएको पाइएको थियो ।
फ्लाइट मोडमा राख्दा तपाईंले सेलुलर वाईफाई नेटवर्कको कनेक्सन गुमाउनुहुन्छ । यसपछि तपाईं फोन गर्न, म्यासेज पठाउन र सोसल मिडिया चलाउन सक्नुहुन्न ।उडानको समयमा तपाईं टेलिफोन टावरहरूको पहुँचबाट बाहिर जानुहुन्छ । तर तपाईंको फोनले लगातार कनेक्सन खोजिरहेको हुन्छ ।
फोनले कनेक्सन फेला पार्न कोशिश गरिरहँदा शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल पठाउँछ । यो सिग्नलको कारण पाइलटले आफ्नो हेडफोनमा कष्टकर आवाज सुन्न थाल्छ ।साथै रेडियो तरंगहरूमा सञ्चारको भीडले पाइलटलाई जमिनमा टावरहरूसँग कुराकानी गर्न गाह्रो वा असम्भव बनाउन सक्छ।फोनलाई एयरप्लेन मोडमा नराख्दा के हुन्छ त ?
प्रत्येक फ्लाइटमा दैनिक दर्जनौं उपकरणहरु एयरप्लेन मोडमा हुँदैनन् भन्ने कुरा नियामक, एयरलाइन्स कम्पनी तथा विमान निर्माणकर्ता कम्पनी सबैलाई थाहा हुन्छ ।किनभने डिभाइस अन राख्ने बित्तिकै विमान आकाशबाट खस्दैन । सबै उपकरणले सबै किसिमका विमानलाई असर गर्न सक्दैन ।तर कतिपय विमानहरु एकदमै संवेदनशील हुन्छन् । यसकारण फाेन तत्काल एयरप्लेन मोडमा राखिहाल्नुहोस् ।
फ्लाइट माेड अन गरी कुनै एप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको फोनको तरङ्गले विमान पल्टिहाल्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्न । सुरक्षाका लागि यस्ताे पूर्वसावधानी अपनाएकाे हाे भनेर बुझ्नुपर्छ ।यसकारण प्लेन उड्नुअघि आफ्नो डिभाइसहरु एयरप्लेन मोडमा छ कि छैन सुनिश्चित गर्नुहोस् । यात्रु जिम्मेवार भएको खण्डमा विमान तपाईंको घर वा कारको यात्राभन्दा धेरै सुरक्षित बन्न सक्छ ।
कोरोनामा मुख्यमन्त्रीको नातेदारको धुमधाम विवाह, रोक्न गएका प्रहरी अधिकारीलाई उल्टै कारवाही (भिडियो हेर्नुस्)